Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.4 Iza no mba manontany
Ny vanim-potoana nomerika dia mahatonga ny famaritana ho sarotra kokoa amin'ny famolavolana henjana kokoa ary mamorona fomba vaovao ho an'ny famaritana tsy fahita firy.
Ao amin'ny tantaran'ny famandrihana, dia nisy fomba roa nifanaovan'ny roa tonta. Na dia samy nampiasaina tamin'ny fomba amam-panao samihafa aza ireo fomba roa ireo, dia nanjary nanan-kery ny famotopotorana, ary maro ireo mpikaroka ara-tsosialy no nampianarina mba hijery ny tsy fahombiazan'ny famandrihana amin'ny fisalasalana be. Na izany aza, araka ny ambarako etsy ambany, ny fanovana noforonin'ny taona dizitaly dia midika fa izao no fotoana iantsoana ny mpikaroka hahatsiaro ny tsy fahombiazan'ny fakan-tsarimihetsika. Ny tena zava-dehibe, ny fametrahana ny fakan-tsarimihetsika dia sarotra atao amin'ny fampiharana, ary ny fahombiazan'ny fakan-tsarimihetsika dia haingana kokoa, mora kokoa, ary tsaratsara kokoa. Ny fanadihadiana lalindalina kokoa sy mora kokoa dia tsy mifototra amin'ny tenany ihany: manome fahafahana vaovao izy ireo, toy ny fanadihadiana matetika sy ny haben'ny santionany. Ohatra, amin'ny fampiasana fomba tsy mampahomby ny Cooperative Congressional Election Study (CCES) dia afaka manana mpandray anjara mavitrika 10 heny bebe kokoa noho ny fianarana vao haingana izay mampiasa fakan-tahiry azo tsapain-tanana. Ity modely lehibe kokoa ity dia ahafahan'ny mpikaroka politika mandalina ny fiovaovan'ny toe-tsaina sy fihetsika manerana ny vondrona sy ny fifandraisana ara-tsosialy. Ankoatr'izany, ny ampahany betsaka tamin'ity (Ansolabehere and Rivers 2013) ity dia tsy nisy fihenam-bidy raha oharina amin'ny tomban'ezaka (Ansolabehere and Rivers 2013) .
Amin'izao fotoana izao, ny fomba fiasa be mpanaraka indrindra amin'ny fikarohana ara-tsosialy dia ny famaritana ny fakan-tsarimihetsika . Raha azo atao ny mamolavola azy, ny mpikambana rehetra ao amin'ny tanjona kinendry dia manana fahatsapana fantatra fa tsy azo tsapain-tanana ny famaritana azy, ary ny olona rehetra voavolavola dia mamaly ny fanadihadiana. Rehefa mahafeno ireo fepetra ireo, ny valiny matematika dia manome antoka azo antoka momba ny fahaizan'ny mpikaroka iray hampiasa ilay ohatra mba hahatonga ny fanentanana momba ny vondron'olona kinendry.
Ao amin'ny tontolo tena izy anefa, dia tsy dia fahita firy ny fepetra momba ny vokatra matematika. Ohatra, misy ny fandrakofam-peo matetika sy tsy resy. Noho ireo olana ireo dia matetika ny mpikaroka no mampiasa ny fanitsiana statistika samihafa mba hahatonga azy ireo hianatra ny mombamomba azy ireo. Noho izany, zava-dehibe ny manavaka ny fahaiza-manao samihafa amin'ny teorika , izay manana antoka ara-toekarena matanjaka, ary ny fahombiazan'ny famandrihana amin'ny fampiharana , izay tsy manome antoka toy izany ary miankina amin'ny fanitsiana statistika isan-karazany.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nitombo ny fahasamihafana misy eo amin'ny taranja problema amin'ny teoria sy ny fametrahana tsimokaretina amin'ny fampiharana. Ohatra, mitombo tsy mitsaha-mitombo ny taham-pahalalahana tsy misy valiny, na dia amin'ny fanadihadiana lafo vidy (sary 3.5) (National Research Council 2013; BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Ny taham-pahasalamana tsy misy valiny dia ambony lavitra noho ny fanadihadiana an-tariby ara-barotra-indraindray na avo tahaka ny 90% (Kohut et al. 2012) . Ireo fitomboan'ny tsy fitoviana dia mandrahona ny kalitaon'ny tombanana satria ny tombantombana dia miankina amin'ny modelim-pahaizana statistika izay ampiasain'ny mpikaroka hanitsy ny tsy famerenana. Ankoatra izany, nihena ny habetsaky ny kalitaona na dia teo aza ny ezaka lafo vidy nataon'ny mpikaroka mpikaroka mba hihazonana ny taham-pidirana avo lenta. Ny olona sasany dia matahotra fa ny firoboroboana kendren'ny fampihenana ny kalitao sy ny fitomboan'ny vola dia manohintohina ny fototry ny fikarohana (National Research Council 2013) .
Sary 3.5: Nitombo hatrany ny tsy fitongilanana, na dia tamin'ny fanadihadiana sarobidy be aza (National Research Council 2013; BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) Biraom- (National Research Council 2013; BD Meyer, Mok, and Sullivan 2015) . Ny taham-pahasalamana tsy misy valiny dia ambony lavitra noho ny fanadihadiana telefaona entana, indraindray na avo tahaka ny 90% (Kohut et al. 2012) . Ireo fironana maharitra eo amin'ny tsy fitongilanana dia midika fa lafo kokoa ny fanangonana angon-drakitra ary ny tombantombana dia tsy azo itokisana. Nifanaraka tamin'ny BD Meyer, Mok, and Sullivan (2015) , sary 1.
Amin'izay fotoana izay ihany koa dia misy fahasarotana mitranga amin'ny famolavolana ny fomba fitiliana, dia nisy ihany koa ny fivoaran-draharaha nahomby teo amin'ny fomba tsy fahombiazan'ny fakàna sampling . Misy karazam-pahaiza-manao samihafa tsy voamarina, fa ny zavatra iray iraisan'ny rehetra dia ny tsy ahafahany mametraka mora amin'ny sehatra matematika azo tsapain-tanana (Baker et al. 2013) . Raha lazaina amin'ny teny hafa, amin'ny fomba tsy dia fahita firy ny famolavolana fomba tsy ahitan'ny olona rehetra ny mety hitranga. Ny tsy fahombiazan'ny fakan-tsarimihetsika dia manana laza malaza amin'ny mpikaroka sosialy ary misy ifandraisany amin'ny tsy fahombiazan'ny mpikaroka fanadihadiana, toy ny litera digest fiasco (voaresaka tany aloha) sy ny "Dewey Defeats Truman", ny fanadihadiana tsy marina momba an'i Etazonia fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 1948 (sary 3.6).
Sary 3.6: Ny Filoha Harry Truman nitazona ny lohatenin'ny gazety iray izay nanambara ny fahareseny. Ity lohateny ity dia mifototra amin'ny fanombatombana avy amin'ireo santionan'ny tsy fahaiza-manao (Mosteller 1949; Bean 1950; Freedman, Pisani, and Purves 2007) . Na dia nitranga tamin'ny 1948 aza ny "Dewey Sasany Truman", dia mbola anisan'ny antony mahatonga ireo mpikaroka sasany tsy sahy manombantombana ny sanda mety tsy ho azo atao. Loharano: Tranomboky Library & Museum of Harry S. Truman .
Ny endrika samihafa azo tsapain-tanana izay manokana ny vanim-potoana nomerika dia ny fampiasana ny tranonkala an - tserasera . Ireo mpikaroka mampiasa pejin'ny onjam-peo dia miankina amin'ny mpandraharaha amin'ny serasera-matetika orinasa, governemanta na oniversite-hanangana vondron'olona lehibe sy samihafa izay manaiky ho mpanampy amin'ny fanadihadiana. Ireo mpandray anjara amin'ny seha-pifaneraserana dia matetika misambotra amin'ny fampiasana karazana dokambarotra maro toy ny dokambarotra an-tserasera. Avy eo, ny mpikaroka iray dia afaka mandoa ny serivisy ho an'ny fidirana amin'ny santionan'ny olona voavaly amin'ny toetra tiany (ohatra, solontenan'ny olom-pirenena). Ireo paikady an-tserasera ireo dia fomba tsy fahita firy satria tsy ny olon-drehetra no manana fahalalana, tsy dia mampidi-doza ny fampidirana. Na dia efa nampiasain'ireo mpikaroka ara-tsosialy (ohatra ny CCES) aza ny tsy fahampian'ny aterineto, dia mbola misy adihevitra sasantsasany momba ny kalitaon'ny tombana azo avy aminy (Callegaro et al. 2014) .
Na dia eo aza ireo adihevitra ireo, heveriko fa misy antony roa mahatonga ny fotoan'ny fotoana ho an'ny mpikaroka ara-tsosialy mba handinihana indray ny tsy fahombiazan'ny fakan-tsarimihetsika. Voalohany, nandritra ny vanim-potoana nomerika, dia nisy ny fivoarana maro tao amin'ny fanangonana sy ny fandalinana ireo santionan'ny tsy fahombiazana. Ireo fomba vaovao ireo dia tsy mitovy amin'ny fomba fiasa izay nahatonga olana tamin'ny lasa izay heveriko fa manan-danja ny mieritreritra azy ireo ho toy ny "tsy fahaiza-manao sampling 2.0." Ny antony faharoa tokony hijerena ireo mpikaroka fa tsy azo atao ny mamolavola tsimok'aretina dia ny fahafaha-mamantatra Mihamafy ny fikarakarana. Raha misy ny taham-pahalalahana avo lenta - toy ny hita ao amin'ny fanadihadiana tena izy ankehitriny-dia tsy fantatra ny tena tanjaky ny fidirana ho an'ny olona voavaly, ary noho izany dia mety tsy ho samy hafa ny fomban'ny mpikaroka raha oharina amin'ny problema sy ny problema tsy azo atao.
Araka ny voalazako teo aloha, dia tsy dia misy fisalasalana loatra ny karazana mpikaroka ara-tsosialy, ny ampahany noho ny anjara andraikiny amin'ny sasany amin'ireo fahadisoam-panantenana faran'izay ratsy indrindra tamin'ny fanombohan'ny fanadihadiana. Ohatra iray mazava momba ny halavitr'ireo fakantsary tsy misy azo isafidianana dia ny fikarohana nataon'i Wei Wang, David Rothschild, Sharad Goel, ary Andrew Gelman (2015) izay nahasitrana tsara ny vokatry ny fifidianana amerikana 2012 tamin'ny fampiasana ny santionan'ny tsy fahombiazan'ny Ireo mpampiasa Amerikana Xbox-iray amin'ireo sehatra Amerikanina tsy mitongilana. Ireo mpikaroka dia nanao fanambarana avy amin'ny rafitra gaming XBox, ary araka izay mety antenainao, ny sombin-tsary Xbox dia mamela ny lahy sy ny vavy: ny tanora 18 ka hatramin'ny 29 taona dia mamaritra 19% amin'ny mpifidy, fa ny 65% ​​amin'ny samirery Xbox, ary ny lehilahy dia mametraka 47% amin'ny mpifidy fa 93% amin'ny sombin-tsary Xbox (sary 3.7). Noho ireo firoboroboana ara-demografika matanjaka ireo, ny tahiry Xbox mena dia tsy dia mampiseho ny fiverenan'ny fifidianana. Nampanantena fandresena matanjaka ho an'i Mitt Romney an'i Barack Obama izany. Indray, ohatra iray hafa amin'ny loza ateraky ny santionany tsy azo tsapain-tanana, tsy mahazatra loatra ary mampahatsiahy ny fiasco Literary Digest .
Sary 3.7: Demographics of respondents in W. Wang et al. (2015) . Satria naverin'ireo mpanadihady avy amin'ny XBox, dia mety ho tanora izy ireo ary mety ho lahy, raha oharina amin'ny mpifidy amin'ny fifidianana 2012. Nampifanarahina tamin'i W. Wang et al. (2015) , sary 1.
Na izany aza, nahafantatra ireo olana ireo i Wang sy ireo mpiara-miasa ary niezaka ny nanitsy ny fizotran'ny famandrihana tsy nahitam-bokatra rehefa nanao tombanana. Amin'ny ankapobeny, nampiasaina ny lahatsoratra-stratification , teknika iray izay ampiasaina betsaka koa mba hampifanaraka ireo karazana probable izay misy fandrakofana diso sy tsy famaliana.
Ny hevitra fototra momba ny fanoratana lahatsoratra dia ny fampiasana ny fanampim-panazavana momba ny vondron'olona kinendry mba hanampy amin'ny fanatsarana ny tombana azo avy amin'ny santionany. Raha mampiasa fampitahorana ny tetikasam-pampianarana mba handraisany tombantombana avy amin'ny modely tsy azony, i Wang sy ny mpiara-miasa dia nanapaka ny vondron'olona tao anatin'ny tarika samihafa, nanombana ny fanohanan'i Obama ao amin'ny vondrona tsirairay, ary avy eo dia nahazo salanisa mavesatra ny tombana ho an'ny vondrona mba hametrahana tombanana ankapobeny. Ohatra, mety ho nizara roa (lehilahy sy vehivavy) ny mponina ny mponina, nanombana ny fanohanany an'i Obama teo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, ary avy eo dia nanombana ny fanohanana ankapobeny ho an'i Obama amin'ny alàlan'ny fanondranana lanjany be loatra mba hanamafisana ny zava-misy ataon'ny vehivavy 53% -n'ny mpifidy ary lehilahy 47%. Raha ny marina, ny lahatsoratra-stratification dia manampy amin'ny fanamafisana ny santionany tsy manivana amin'ny fampidirana fanazavana fanampiny momba ny haben'ny vondrona.
Ny fanalahidin'ny post-stratification dia ny mamorona ny vondrona mety. Raha azonao atao ny manaisotra ny vahoaka ho toy ny vondrona tsy manan-kialofana toy izany, dia mitovy ho an'ny olon-drehetra ao amin'ny vondrona tsirairay ny fihenan'ny valim-panontaniana, avy eo dia mitombina ny tombantomban'ny tetikasa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny tetikady fitadiavam-bahaolana amin'ny alalan'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy dia hamoaka tombam-bidin'ny tsy manara-dalàna raha toa ka manana ny fihenan-tsakafo ny lehilahy rehetra ary ny vehivavy rehetra dia samy manana ny valiny mitovy. Izany fanandramana izany dia antsoina hoe ny homogeneous-response-propensities-ny vondron'olona vondron'olona , ary dia mamaritra azy bebe kokoa ao amin'ny matematika ao amin'ny faran'ity toko ity.
Mazava ho azy, toa tsy dia azo eritreretina loatra fa ny fihenan'ny valinteny dia mitovy ho an'ny lehilahy sy vehivavy rehetra. Na izany aza, ny fiheveran'ny homogenny-valiny-ny vinavina ao anatin'ny vondrona dia mihalalina kokoa rehefa mitombo ny isan'ireo tarika. Mora kokoa ny manapaka ny vondron'olona ao an-toerana raha toa ka manangana antoko maro kokoa. Ohatra, mety toa tsy mety ny fiheverana fa ny vehivavy rehetra dia samy manana ny fihenan-tsainy, saingy mety ho azo tsapain-kevitra kokoa izany fa misy ny fihenan-kery ho an'ny vehivavy rehetra 18-29 taona, izay nahazo diplaoma avy amin'ny oniversite, ary monina any Kalifornia . Araka izany, satria mihamitombo ny isan'ireo vondrona ampiasaina amin'ny làlan-java-manahirana, ny vinavina ilaina mba hanohanana ny fomba dia lasa ara-dalàna. Raha ny marina, ny mpikaroka matetika dia maniry ny hamorona vondrona maromaro maromaro ho an'ny stratification. Na izany aza, rehefa mitombo ny isan'ireo vondrona, dia mitarika olana hafa ny mpikaroka: fitadiavana vahaolana. Raha vitsy dia vitsy ny olona ao amin'ny vondrona tsirairay, dia ho tsy azo antoka ny tombantombana, ary amin'ny tranga faratampony izay misy vondrona izay tsy misy olona voavaly, dia tapaka tanteraka ny fandefasana lahatsoratra.
Misy fomba roa tsy ahitàna ny fihenjanana mihatra eo anelanelan'ny plausibilité ny fananana homogeneous-response-propensity-ao anatin'ny vondrona ary ny fangatahana ambaratongam-pitsaboana mety amin'ny vondrona tsirairay. Voalohany, ireo mpikaroka dia afaka manangona santionana lehibe kokoa sy samihafa, izay manampy amin'ny fitazonana ireo anton-javatra azo itokisana amin'ny vondrona tsirairay. Faharoa, afaka mampiasa modely statistika miavaka kokoa izy ireo amin'ny fanatanterahana tombana amin'ny tarika. Ary raha ny marina, indraindray ireo mpikaroka dia samy manao, tahaka an'i Wang sy ireo mpiara-miasa nanao ny fandalinan'izy ireo ny fifidianana tamin'ny valinteny avy amin'ny Xbox.
Noho ny fampiasany fomba tsy mahazatra ny fametrahana ny fifanakalozan-kevitry ny solosaina (miresaka bebe kokoa momba ny dinidinika momba ny solosaina ao amin'ny fizarana faha-3.5), i Wang sy ny mpiara-miasa dia nahitam-bokatra tsy dia mahafa-po, ka nahafahan'izy ireo nanangona vaovao avy amin'ireo mpandray anjara manan-danja 345.858 , isa marobe amin'ny fenitry ny fifidianana filoham-pirenena. Ity habeny be dia be ity dia nahatonga azy ireo hamorona antokon'olona vitsy an'isa. Na dia eo aza ny fanakanana ny fanoratana, dia misy ireo vondrona an-jatony maro, i Wang sy ireo mpiara-miasa dia mizara ny mponina ho vondrona 176.256 voafaritra amin'ny sokajy (sokajy roa), ny hazakazaka (sokajy 4), ny taona (sokajy 4), ny fanabeazana (sokajy 4), ny fanjakana (Sokajy 51), ID (sokajy 3), ideolojia (sokajy telo), ary fifidianana (sokajy 3). Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny halehiben'ny halehiben'izy ireo, izay novolavolaina tamin'ny fanangonam-bola tsy misy vidiny, dia nahafahan'izy ireo nanao ny heviny bebe kokoa tamin'ny fanombantombanana.
Na dia tamin'ireo mpandray anjara tsy manan-tsahala 345.858 aza, dia mbola maro ireo, vondrona maro izay tsy nisy namaly ireo Wang sy ireo mpiara-miasa. Noho izany dia nampiasa teknika antsoina hoe multilevel regression izy ireo mba hanombanana ny fanohanan'ny vondrona tsirairay. Amin'ny ankapobeny, ny fanombanana ny fanohanana an'i Obama ao anatin'ny vondrona iray manokana, ny fiverimberenan'ny maro dia nampifandray ny vaovao avy amin'ireo vondrona mifandray akaiky. Ohatra, eritrereto hoe manandrana manombatombana ny fanohanana an'i Obama eo amin'ireo vehivavy Hispanika eo anelanelan'ny 18 sy 29 taona, izay nahazo diplaoma tao amin'ny oniversite, izay voasoratra anarana Demokraty, izay mamaritra ny tenany ho mody, ary nifidy an'i Obama tamin'ny 2008. Tena , vondrona voafaritra manokana, ary mety tsy misy olona ao amin'ny santionany amin'ireo toetra ireo. Noho izany, ny fanombanana tombantombana momba ity vondrona ity, dia ny fampihetseham-be maro no mampiasa ny modely statistika mba hanangonam-bidy ny tomban'ezaka avy amin'ny olona manana vondrona mitovy.
Noho izany, i Wang sy ireo mpiara-miasa dia nampiasa fomba iray izay nampiarahana ny famerenan-dàlana marobe sy ny tari-dalàm-pitenenana, ka niantso ny paikadiny an- dalàm- be izy ireo amin'ny fanoratana lahatsoratra na, tony kokoa, "Atoa. P. "Raha nampiasain'i Mr. P. Wang sy ireo mpiara-miasa aminy hanao fanombanana avy amin'ny modelin'ny XBox izay tsy azo atao, dia nametraka tombantombana izy ireo manakaiky ny fanohanana ankapobeny izay noraisin'i Obama tamin'ny fifidianana 2012 (sary 3.8). Raha ny marina, ny sain-dry zareo dia marina kokoa noho ny vondron'ireo fitsapan-kevitra nentim-paharazana nentim-paharazana. Noho izany, amin'ity tranga ity, ny fanitsiana statistika-indrindra ny Mr. P.-dia toa manao asa tsara hanitsiana ireo hevi-diso amin'ny angona tsy fahita firy; ireo fanitsakitsahana izay hita mazava rehefa jerena ny sanda avy amin'ireo angona Xbox tsy misy fepetra.
Sary 3.8: Manombana avy amin'i W. Wang et al. (2015) . Ny fametrahana XBox tsy voafaritra dia namorona sanda tsy marina. Saingy, ny santionan-tsary XBox natombony dia namorona tombanana izay marina kokoa noho ny antsasaky ny fanadihadiana an-telefaona azo antoka. Nampifanarahina tamin'i W. Wang et al. (2015) , figadrana 2 sy 3.
Misy lesona roa lehibe avy amin'ny fianarana an'i Wang sy ireo mpiara-miasa aminy. Voalohany, ny mombamomba ny tsy fahampiana tsy mety dia afaka miteraka tombombarotra ratsy; Ity dia lesona izay hitan'ny mpikaroka maro talohan'izay. Ny lesona faharoa anefa dia ny hoe tsy azo atao ny mamaritra ny mombamomba azy ireo, rehefa mandinika tsara, dia mety hanome tombony tsara. Ny fakan-tsarimihetsika tsy azo atao dia tsy mila mitarika mankany amin'ny zavatra toy ny fiasan-tsarin'ny Literary Digest .
Mandeha mialoha, raha miezaka ny manapa-kevitra ianao amin'ny fampiasana fomba fijery samihafa azo tsapain-tanana sy ny fomba tsy ahafahana mamandrika dia miatrika safidy sarotra. Indraindray ny mpikaroka dia maniry ny fitsipika haingana sy hentitra (ohatra, ampiasaina foana ny fomba famandrihana azo atao), fa sarotra kokoa ny manolotra izany fitsipika izany. Ny mpikaroka dia miatrika safidy sarotra azo avy amin'ny fahaiza-manao samihafa amin'ny fomba fampiharana - izay lafo dia lafo sy lavitra ny vokatra teôreika izay manamarina ny fampiasana azy - sy ny fomba tsy ahafahana mamandrika ny fakan-tsolika - izay mora kokoa sy haingana kokoa, nefa tsy dia mahazatra loatra ary miovaova be. Ny zavatra iray mazava anefa dia ny hoe raha toa ka voatery hiasa miaraka amin'ireo karazam-pahaizana tsy miorina ianao na ireo loharanom-baovao goavam-be (mieritreritra ny toko 2), dia misy antony matanjaka ny mino fa ny tomban'ezaka natao tamin'ny fampiasana ny tari-dalana Ny teknika mifandraika amin'izany dia tsara kokoa noho ny tombantombana tsy mendrika sy mena.